Kanada, firenena tsara indrindra itetezana amin'ny taona 2017 araka ny Lonely Planet | Vaovao momba ny dia
Maria | | America, Canadá
Toy ny isan-taona, Lonely Planet dia namoaka ny lisitry ny toerana fitsangatsanganana amin'ny 2017. Izany dia mazàna ahitana ireo toerana misongadina izay mankalaza karazana fahatsiarovana na mitaky fahitana ny fahamendrehany ho an'ny sain'ny mpandeha.
Tamin'ny faran'ny taona 2015 dia i Botswana no nalahatra ho firenena tsara indrindra notsidihina tamin'ny 2016 raha oharina amin'ny hafa toa an'i Japon, Etazonia, Latvia, Uruguay ary Polonina. Anisan'ny anton'izany ny hatsaran-tarehiny mahafinaritra, ny bibidia goavambe monina azy ireo na ny tsy fantatra Gaborone, tanàna lehibe indrindra ao amin'ny firenena.
fa, Inona avy ireo antony nahatonga an'i Lonely Planet hisafidy an'i Canada ho firenena tsara indrindra hitsidika amin'ny 2017?
Misy antony maro mahatonga an'i Canada no mitana ny laharana voalohany amin'ity laharana ity (avy eo dia hambarantsika ny ambin'ny mpandresy) ny sasany amin'izany dia: ireo fotodrafitrasa lehibe natokana ho an'ny fizahantany, ny faha-150 taonan'ny fahaleovantenan'ny firenena izay hankalazain'ny rehetra. ny dolara kanadiana ambony sy malemy izay ahafahan'ny mpizahatany iraisam-pirenena manao zavatra lehibe amin'ny fialan-tsasatra ataon'izy ireo.
1 Kanada dia mitovy dika amin'ny natiora
2 Hetsika hatao any Canada
3 Ny fahafinaretana amin'ny gastronomy kanadiana
4 Hetsika ara-kolontsaina isam-bolana
5 Firenena inona avy no atolotry ny Lonely Planet ho an'ny 2017?
Kanada dia mitovy dika amin'ny natiora
Kanada dia tany notahian'ny natiora. Io no firenena faharoa lehibe indrindra eto an-tany miaraka amin'ny endrika tsy manam-petra. Tendrombohitra, vongan-dranomandry, ala orana, tanimbary ary morontsiraka avo-be. Fantatrao ve fa amin'ny kilometatra amoron-tsiraka izay ananan'i Canada, ny antsasaky ny halaviran'ny volana dia ho voasarona amin'ny fametrahana azy ireo amin'ny tsipika mahitsy? Ary misy ny ranomasimbe telo mandro ny morontsiraka: Atlantika, Pasifika ary Artika.
Kanada dia manana tontolo voajanahary izay mamela ny mpitsidika tsy miteny. Ny valan-javaboary nasionaly malaza dia anisan'ny tsara indrindra indrindra eto an-tany, indrindra ireo hita any amin'ny Rocky Mountains. Ankoatr'izay, ny farihy Maligne, Louise ary Moraine dia fitaratra manga voahodidin'ny tendrombohitra sy ala maitso. Sary idyllic izay tsy hadinon'ireo mpandeha mitsidika azy ireo mihitsy.
Ny fijerena bera mahafinaritra ao amin'ny Khutzeymateen Sanctuary, akaikin'ny Prince Rupert, dia traikefa iray hafa mahatalanjona mandritra ny fijanonanao any Canada. Ny biby hafa tsy manam-paharoa hafa izay hita eto dia ny bera polar, trozona ary moose tongotra tongotra.
Hetsika hatao any Canada
Na inona na inona ora amin'ny taona hitsidihantsika an'i Canada, dia misy hatrany ny traikefa nahafinaritra sy mahafinaritra tokony hiaina eto. Ohatra, mankany avaratra mankany amin'ny faritanin'i Yukon, azo atao ny manaraka ny dian'i Jack London sy ireo mpitsangatsangana izay nanaraka ny lalan'ny volamena teny amin'ny ony Klondike sy tao amin'ny tanànan'i Dawson, anisan'izany ny làlana Chilkoot Pass izay nalaza. Betsaka ny traikefa nahafinaritra taorinan'ny fiainana an-tany, toy ny fandehandehanana any amin'ny Vancouver's Stanley Park Dam, ny fandroana ny morontsiraka fasika mavokely amin'ny Prince Edward Island (IPE), na ny fitetezana ranomandry any amin'ny Lakandranon'i Rideau any Ottawa.
Ny fahafinaretana amin'ny gastronomy kanadiana
Na dia marina aza fa ny gastronomie kanadiana dia tsy manana ny lazany iraisampirenena frantsay, italianina na japoney, ny firenena dia manolotra karazan-tsakafo marobe ao an-toerana izay anaovan'ny akora akora manokana. Ny voankazo sy legioma vaovao dia tsiambaratelo hita, toy izany koa ny hazan-dranomasina, trondro, fromazy na divay matsiro nambolena tao an-dohasahan'i Canada.
Mandritra ny fialan-tsasatra any Canada dia tsara kokoa ny tsy mitandrina ny tsipika ary manaram-po amin'ny fahafinaretana amin'ny gastronomie miaraka amin'ny lovia toy ny lobster amin'ny dibera, salmon miaraka amin'ny scallops, pie berry na bream an-dranomasina miaraka amin'ny saosy sy fromazy.
Hetsika ara-kolontsaina isam-bolana
Fetin'ny ririnina. Amin'ny alàlan'ny Tsipika tsotra.
Amin'ny fomba fijery ara-kolotsaina, ny fitsangatsanganana any Kanada dia mety hampanan-karena tokoa. Betsaka ny tranombakoka, klioban'ny mozika ary festival misy manerana ny firenena. Raha misongadina ny zavatra iray dia tsy maintsy mankalaza zavatra foana i Canada mandritra ny taona, ka misy hetsika ara-kolontsaina saika isam-bolana.: Ny Fetiben'ny divay misy ranomandry any Okanagan tamin'ny volana Janoary, ny Fetiben'ny Ririnina any Quebec tamin'ny volana feb powwow Regina tamin'ny volana martsa, ny festival ski ary ny SnowboardWhistler tamin'ny volana aprily, ny Fetiben'ny Ottawa Tulip tamin'ny Mey, ny Fetiben'ny Jazz Montreal tamin'ny volana Jona, ny Calgary Stampede tamin'ny volana Jolay, ny Fetiben'ny Acadian New Brunwick tamin'ny volana Aogositra, ny Fetiben'ny horonantsary Toronto tamin'ny volana septambra, ny Oktoberfest tany Kitchner tamin'ny volana oktobra, ny fety aborigine Hamilton tamin'ny Novambra, ny Fetiben'ny Ririnina Niagara tamin'ny Desambra.
Firenena inona avy no atolotry ny Lonely Planet ho an'ny 2017?
Ireto no firenena tena ilaina 10 amin'ny taona ho avy:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Kanada, firenena tsara indrindra mankany amin'ny 2017 raha ny filazan'ny Lonely Planet
Zavatra hita sy hatao any Egypt (II)